fanontaniana New Member Ikarusc42
1 taona 4 andro lasa izay #1184 by Ikarusc42
Misaotra ny rehetra. Efa niaraka tamiko androany aho. Izaho dia Chelsea mpandoa hetra monina any London UK. Nandalo fiaramanidina aho nanomboka tamin'ny 1980. Izaho ihany koa dia nanao Lisitry ny Pilotsaky Private ho an'ny 2016 raha toa ka lafo loatra ho ahy ny manidina. Nanatevin-daharana an'i Rikoooo aho mba hahazoana ny Boeing Osprey saingy tsy afaka ny maka azy amin'ny alalan'ny rafitra IT mifandraika aminy satria tsy hamela ny ports 8080 na 8888.
Afaka manolotra fomba iray ahafahako mahazo ny Osprey ??? Misaotra anao amin'ny fanantenana.